Ciidammada Suuriya oo cirka laga soo duqeeyay - BBC Somali
Ciidammada Suuriya oo cirka laga soo duqeeyay
Image caption haddii weerarkaasi rumoobo wuxuu noqon kii u horeyay ee noociisa ah.
Weerar xagga cirka ah oo looga shakisanyahay in ay ka dambeeyaan xulafada uu Maraykanku hogaaminayo ayaa lagu laayay qaar ka mid ah millitariga dalka Suuriya sida ay sheegeen qolyaha la socda xaaladda Suuriya.
Weerarkaasi waxa uu ka dhacay gobolka Deir al-Zour, halkaas oo ay inta badan ka arrimiyaan kooxda jihaad doonka ah ee isugu yeerta Dawladda Islaamka sida ay sheegeen qolyaha la socda xuquuqda aadanaha ee Suuriya.
Haddii la xaqiijiyo wuxuu noqon doonaa weerarkii u horeeyay ee xulafadu ku dilaan ciidammada dawladda.
Qolyaha xaaladda Suuriya la socda ee fadhigoodu yahay Britain, ayaa sheegay in sidoo kale la dhaawacay 13 ka mid ah millitariga.
Weerarkaasi waxa uu ka dhacay qaybo ka mid ah saldhiga ciidammada ee Saeqa oo u dhaw Ayyash sida ay qolyahaasi sheegeen.
Dawladda Islaamka ayaa maamusha inta badan gobolkasi, meelaha ay maamulaana waxaa ka mid ah inta badan magaalada caasimadda u ah gobolkaasi Deir al-Zour.
Weerar kale oo loomalaynayo in ay qaadeen xulafada oo xalay ka dhacay isla magaaladaasi ayay ku dhinteen haweenay iyo labo ka mid ah caruurteedii sida ay sheegeen qolyaha xaaladda Suuriya la socda.
Gobolka Deir al-Zour wuxuu isku xiraa xarunta kooxda Dawladda Islaamka ee Raqqa, aagaas oo ah goobaha ay ku yaalaan warshadaha Shidaalka oo ay lacago badan ka heleen Dawladda Islaamku.